”Xiriir fiican baan la yeelanaynaa!” – Shiinaha oo sheegay inuu taageerayo in ”dowlad Islaami ah oo furan” laga dhiso Afghanstan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Xiriir fiican baan la yeelanaynaa!” – Shiinaha oo sheegay inuu taageerayo in...
”Xiriir fiican baan la yeelanaynaa!” – Shiinaha oo sheegay inuu taageerayo in ”dowlad Islaami ah oo furan” laga dhiso Afghanstan
(Beijing) 16 Agoosto 2021 – China ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu “xiriir qoto dheer oo saaxiibtinnimo iyo iskaashi ku dhisan” la yeesho Afghanistan, sida uu sheegay Afhayeenka dalkaasi kaddib markii ay halkaa qabsadeen kooxda Daalibaan.
Beijing ayaa la sheegayaa inay markii horeba xiriir aan toos ahayn ay la lahayd Daalibaanka oo muddo yar ku wada qabsaday Afghanistan, kaddib markii ay bexeen xulufadii uu Maraykanku u madaxa waynaa, iyagoo shalay galay Kabul.
China ayaa xad kooban oo gaaraya 76-km (47-mayl) la leh dalka Afghanistan, iyadoo ay
Beijing muddo ka baqanaysey in Afghanistan ay saldhig u noqoto Muslimiinta gooni goosad doonka ah ee Uyghur oo deggan gobolka xadka ku yaal ee Xinjiang.
Yeelkeede, waxaa dhowaan dhacay kulan dhexsaday wefdi heer sare ah oo Daalibaan ka socdey iyo Wasiir Dibadeedka Chinese-ka ee Wang Yi in Tianjin kaasoo ku beegnaa bishii hore, waxayna Shiinuhu ku yabooheen inay maalgeliyaan mashaariicda dib u dhiska Afghanistan.
Shiinaha oo maanta hadlay ayaa soo dhoweeyey wax ay ku sheegeen ”fursad lagu samayn xiriir qoto dheer” oo dhexmara iyaga iyo dalkan oo aalaaba ah mid istaraatiji ah oo ay ku faltamaan cududaha caalamku.
“Daalibaanku waxay si ku celcelis ah u muujiyeen rajadooda ku aaddan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan Shiinaha, waxayna dhararayaan inuu Shiinuhu ka qayb galo dib u dhiska iyo horumarinta Afghanistan,” ayay tiri Hua Chunying, Afhayeenka WAD Shiinaha oo goor dhow saxaafadda war siisay iyadoo sheegtay inuu Shiinuhu ixtiraamayo inay dadka dalkaasi aayohooda iyagu go’aamiyaan.
Hua ayaa Daalibaan ugu baaqday inay “hubaal ka dhigaan in awoodda loola kala wareego si nabdoon” isla markaana ay kasoo baxaan ballantii ahayd inay dhisaan “dowlad furan oo Islaami ah” oo hubinaysa amaanka dadka dalkaasi ee Afghan-ka ah iyo muwaadiniinta shisheeye.
Waxaa weli shaqaynaysa Safaaradda China ee Kabul, sida ay xaqiijisay Hua, waloow ay Beijing bilowday daad guraynta dadka Chinese-ka ah dhowr bilood kahor kaddib markii ay xaaladdu kasii dartay.
Previous articleMaxaa ka dhalan kara War Murtiyeedka maanta kasoo baxay Midowga Musharrixiinta?!! (Mid horay uga hoostay)
Next articleFly Emirates oo shalay jab kala kulantay Kabul oo ay duullimaad ku lahayd